စူးစမ်း၊ငါ့စာမျက်နှာ - ဗီဒီယိုစကားပြောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း! နိုင်ငံအားလုံး၊နိုင်ငံခြားရေး၊လောကဓာတ်လုံးကို။
Кӹлвлӓ дӓ т. м иӓшӹн цилӓ ӹдӹр нелӹ ылын.
ဝဘ်ချက်တင်ကစားတဲ့ ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ အခမဲ့ အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဓါတ္ပံုဗီဒီယို ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းစစ်ဆေး ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများအခမဲ့အွန်လိုင်း ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ၡမ်ား ဗီဒီယိုနိဒါန်း ၁၈ မှတ်ပုံတင်ခြင်းရွေးချယ်စရာ ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း တွေ့ဆုံရန်ဖို့မှတ်ပုံတင်